Scott Vaughan, CMO an'ny Integrate
Lahatsoratra nosoratan'i Scott Vaughan
Scott Vaughan, CMO an'ny mampiditra, mitarika ny paikadim-barotra any amin'ny tsena ary mifantoka amin'ny famantarana sy fampandrosoana ny mpanjifa mitombo haingana sy ny fifandraisana amin'ny tsena. Ny fitiavany dia mifantoka amin'ny famahana ny mety hisian'ny marketing, ny haino aman-jery ary ny teknolojia hitarika ny lanjan'orinasa sy ny mpanjifa.
Ny hoavin'ny martech
Zoma, Septambra 26, 2014 Zoma, Septambra 26, 2014 Scott Vaughan
Ny ankehitriny sy ny ho avy ny Teknolojia Marketing dia niadian-kevitra ary nalaina tamin'ny fivorian'ny Martech Conference tany Boston. Hetsika efa namidy ity izay nampivondrona ireo mpitarika eritreritra isan-karazany tao amin'ny tontolon'ny Martech. Talohan'izay dia nanana fotoana nifandraisako tamin'ny talen'ny fihaonambe, Scott Brinker, hiresaka momba ny fivoaran'ny indostria sy ny nahatonga ny anjara asan'ny Chief Teknolojian'ny Marketing izay tokony hanana andraikitra ao anatin'ny fikambanana marketing manerana an'izao tontolo izao. Ao amin'ny resakay, Scott